गणपूरक संख्या नपुगेपछि अर्थ समितिको बैठक स्थगित, सांसदले सोधे- भत्ता पाउँछौं कि पाउँदैनौं ? – Clickmandu
गणपूरक संख्या नपुगेपछि अर्थ समितिको बैठक स्थगित, सांसदले सोधे- भत्ता पाउँछौं कि पाउँदैनौं ?
क्लिकमान्डु २०७६ कार्तिक १९ गते १३:४२ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सामान्यता कुनै काम गरेपछि त्यसको पारिश्रमिक पाइन्छ । यो आम नियम हो । तर, संघीय संसदको एक समितिको आजको बैठक नै नबसी सांसदले भक्ता वा पारिश्रमिक मागे भन्ने सुन्दा तपाईलाई कस्तो लाग्छ ? तपाईको उत्तर सहजै आउँछ, यो भन्दा नालायकी अरु के हुन सक्छ । यो सरासर गैरकानूनी हो जानकारहरु यसै भन्छन् ।
जुन गलत र नाजायज लाग्छ, मंगलबार भने संसदीय समितिमा त्यस्तै भएको छ । संसदको महत्वपूर्ण समितिको रुपमा अर्थ समितिलाई लिइन्छ । देशको आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित विषयमा बहस छलफल गर्ने उक्त समितिको बैठकमा गणपूरक नै नपुगेर बैठक नबसेपनि सांसदहरुले भक्ता दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
काम नै नगरी पारिश्रमिक वा भक्ता देऊ भन्न सामान्य नागरिकले त पाउँदैन भने कानून बनाउने निकायका प्रतिनिधि जो जनताबाट निर्वाचित भएका छन् उनैले मागेर आफ्नै बेइज्जत गरेका छन् ।
समितिको बैठक सांसदहरुको गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगन भयो । समितिको आजको बैठकको कार्यसूचीमा नागरिक लगानी कोषको ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको थियो । समितिले सोमबार ११ बजे सांसदहरुलाई बैठकमा बोलाएको थियो ।
सामान्यतया कुनैपनि बैठक बस्ने निणर्य समितिले गरिसकेपछि केही समस्या भएमा वा गणपूरक संख्या नपुगेमा उक्त बैठक बस्ने वा नबस्ने भन्ने निर्याय बढीमा आधा घण्टामा गरिन्छ । दुई दर्जन बढी सदस्य भएको उक्त समितिमा मात्रै ८ जना सांसद उपस्थित भएका थिए । सामान्यता आधा घण्टामा स्थगित गर्नुपर्ने बैठक गणपूरक संस्या नपुगेपछि १२ः१४ बजे मात्रै स्थगित भयो ।
सांसदहरु महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न नै सहभागी नहुनु आफैमा बिडम्वना नै हो । जनताले जे कामका लागि पठाएका हुन सोही काम छाड्न् लापरवाहीको पराकाष्ठा त हुँदै हो । त्यसमाथि समितिको सचिवालयले अघिल्लो दिन नै बैठक तय गरेकाले गणपूरक संख्या नपुग्नु अर्को लाजमर्दो विषय आफैमा हो ।
नागरिक लगानी कोषको ऐन संशोधन गर्न बनेको विधयकमा छलफल गर्न ८ सांसद मात्र बैठकमा उपस्थित रहेको समिति सभापति कृष्ण दाहाल आफै गनेर बसेका थिए ।
महत्वपूर्ण विषयमा छलफल हुन नसकेर बैठक स्थगन भएपनि सांसद भने विषय तिर भन्दा भक्ता तिर ध्यान दिइरहेको समितिमा देखियो । एक सांसदले त मुखै फोरेर भने ‘ माननीय सभापति ज्यू बैठकको भक्ता पाइन्छ कि पाइदैन ? ’ बैठक स्थगित हुने निश्चत भएपछि बैठकमा उपस्थीत सांसदहरु मोती दुगड र हिरा गुरुङले बैठकमा सहभागी त भयौ हाम्रो के हुन्छ ? भन्दै सभापति दाहाललाई प्रश्न गरिरहेका थिए ।
सांसदहरुले हाम्रो के हुन्छ भन्दै सभापतिलाई प्रश्न गरिरहेको बेला पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले तपाईहरुले भक्ताको कुरा गर्नुभएको हो ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।
उनीहरुले पटक पटक सभापतिलाई सोधे-अब हाम्रो यो समयको भत्ताको के हुन्छ ? भक्ताको विषयमा सांसदहरुले पटक पटक प्रश्न सोधेर हैरान पारेपछि सभापति दाहालको अनुहार बदलियो । उनीहरुले गलत प्रश्न सोधेर परेसान पारेको सभापतिको बढील्याग्वेजबाट बुझन् सकिन्थ्यो ।
अति भएपछि उत्तर दिने मनस्थितीमा सभापति दाहाल पुगे र भने- तपाईहरु प्रतिनिधीसभाको बैठकमा सहभागी हुन जाँदा हाजिर गरेर बैठक नचल्दा जे हुन्छ, यहाँ पनि त्यही नै हुन्छ ।
प्रतिनिधीसभाको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेमा उपस्थीत सांसदहरुले हाजिर गरिसकेपछि सांसदको संख्या पुगेन भनेर बैठक स्थगन हुने र उपस्थीत सांसदको हाजिरीको आधारमा संघीय सांसद सचिवालयको अर्थ लेखाशाखाले महिना महिनामा सांसदलाई नियमित भत्ता र ट्याक्सी खर्च उपलब्ध गराउँछ ।
भत्ताको लोभमा बैठकमा उपस्थीत हुने सांसदहरु बैठकमा सम्बन्धीत बिषय उपर छलफल नभए भत्ता कै लिन कै लागि भएपनि हाजिर गरिरहेका थिए ।
समितिको आजको बैठक स्थगित भएको केही समयपछि मात्र समितिमा आइपुगेकी अर्की सांसद जुली महतो छलफलको बिषय के थियो, किन बैठक स्थगन भयो भनेर बुझ्न आवश्यक पनि नठानी हाजिर मात्रै गरेर फर्किइन ।